समृद्धि फाइनान्सको हकप्रदलाई ग्रेड ५ रेटिङ्ग
साउन १४, काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले निष्कासन गर्न लागेको २०० प्रतिशत हकप्रद शेयरका लागि इक्रा नेपालले कमजोर आधार जनाउने इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ५ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
कम्पनीले १ बराबर २ को अनुपातमा रू. ३६ करोड ३९ लाख ६० हजार ६०० बराबरको ३६ लाख ३९ हजार ६०६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कम्पनीले गत फागुन २३ गतेनै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
बोर्डको वेबसाइटलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीलाई बोर्डले असार ३० गते सुझाव पठाएको छ ।उक्त कम्पनीको हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू.१८ करोड १९ लाख ८० हजारको आधारमा २०० प्रतिशत हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो । उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू.२ करोड ४८ लाख ७२ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
सो अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १ करोड ९८ लाख ९७ हजार छ । जगेडाकोष रकम रू.२३ करोड ५० लाखभन्दा बढी छ । प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. १८ दशमलव २२ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ६८ दशमलव १२ रहेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा जीवन व्यवसायमा भन्दा निर्जीवन व्यवसायमा बढी [२०७७ सावन, २०]
धितोपत्रको दोस्रो बजारका करीब १८% लगानीकर्ता मात्र अनलाईन कारोबारमा आवद्ध [२०७७ सावन, १९]